Ajụjụ - Dongguan Washine packaging technology Co., Ltd.
Ajuju Ndi Oge
N’okpuru, ị ga-ahụ azịza nye ajụjụ ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụkarị gbasara ịmepụta igbe omenala. Usoro ọ bụla dị iche iche n'agbanyeghị na, yabụ egbula oge isoro ihe ọ bụla ọzọ ị nwere ike ịna-eche.
Kedụ ka m ga-esi mara ma a na-ebipụta akwụkwọ ọgụgụ m
Onye ọrụ okike anyị ga-enyocha imewe igbe nke ngwaahịa gị maka nsogbu ọrụ ọ bụla (nka ọrụ ọrụ, nchapụta, mgbawa, ahịrị dị warara na ọbara) ma ọ bụrụ na achọpụtara, ọ ga-ahụ ya maka ntinye uche gị na ihe ngosi ahụ.Ọ bụrụ na ejighị n'aka etu esi edozi. ihe nbipụta ọ bụla edere, mara na injinia anyị nwere obi ụtọ inyere gị aka na usoro a. Ọ dị mkpa iburu n’uche na ndị otu anyị anaghị enyocha mmehie ma ọ bụ asambodo ụtọ asụsụ, ha anaghị enye nzaghachi ọ bụla na ntanetị ederede.
Nhọrọ ndị dị na-emetụta ọnụahịa m?
Dịka onye na - emeputa olu dị elu nke nwere oke akụ na ụba, nkwakọ ngwaahịa Washine na - enye ọnụahịa kachasị asọmpi na igbe omenala dị. Ricnye ọnụahịa bụ ihe dịkarịsịrị iche maka ihe ise: akụkụ, ụdị igbe, mkpuchi ink na igbe, ihe igbe, yana ọtụtụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara ịnye ọnụahịa ma ọ bụ nhọrọ ndị nwere ike imetụta usoro gị, teat ndị ahịa anyị nwere obi ụtọ inyere aka.
Kedụ ozi m ga-eme ka ị mara ma m chọrọ inweta nkọwapụta?
Biko jiri obiọma ziga nha igbe, ụlo, ihe na akwụkwọ mbipụta gị. Ọnụ ego FOB bụ oge ọnụahịa anyị na mbụ, Ọ bụrụ na ịchọrọ CIF ma ọ bụ CFR, biko mee ka anyị mata ọdụ ụgbọ mmiri ị na-aga. Ntughari izizi sitere na gị ga - akachasị mma iji dokwuo anya, foto igbe ma ọ bụ ihe osise nwere ike ịrụ ọrụ!
Ọ bụrụ na ngwaahịa nwere ụfọdụ okwu mma, olee ihe ị ga - eme ya?
A ga-enyocha igbe ọ bụla 100% site na QC tupu etinye ya n'ime katọn. Ọ bụrụ na ebumnuche dị mma nke anyị kpatara, anyị ga-eweta ọrụ nnọchi.
Could nwere ike ịnye ụfọdụ maka nlele?
Ee, anyị na-enye ndị ahịa ntinye n'efu maka ya, ọ dị gị mkpa ịnwe ụgwọ efu.